Come possiamo evitare di diventare "stanchi di fare il bene"? | PREGHIERA&NEWS
Gịnị ka anyị ga-eme ka ‘ike na-agwụ anyị ime ihe ọma’?
Paolo Tescione	Edere ya November 5, 2020 November 5, 2020
"Ka ike ghara ịgwụ anyị ime ihe ọma, n'ihi na mgbe oge ruru, anyị ga-aghọrọ mkpụrụ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà" (Ndị Galeshia 6: 9).
Nnyin idi ubok ye ukot Abasi mi ke isong, ekot man inwam mbon efen onyung obop mmo. N’ezie, Onye-nwe-anyị na-atụ anya ka anyị jiri ụma chọọ ụzọ iji gosipụta ịhụnanya Ya n’ebe ma ndị kwere ekwe ibe anyị nọ ma ndị anyị na-ezute n’ụwa kwa ụbọchị.
Mana dika mmadu, anyi nwere oke nke ike, nke uche na nke uche. N’ihi ya, n’agbanyeghị otú o si agụsi anyị agụụ ike ijere Chineke ozi, ike gwụrụ anyị obere oge. Ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọrụ anyị anaghị agbanwe agbanwe, nkụda mmụọ nwekwara ike ịgbanye mkpọrọgwụ.
Pọl onyeozi ghọtara nsogbu a. Ọ na-ahụkarị onwe ya na njedebe nke ịgba ọsọ ma kwupụta mgba ya n'oge ndị ahụ dị ala. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ gbakere, kpebisie ike ịga n'ihu na-akpọ oku Chineke na ndụ ya. Ọ gbara ndị na-agụ akwụkwọ ya ume ime otu nhọrọ.
"Ka anyị were ntachi obi na-agba ọsọ nke a kapịrị maka anyị, na-elekwasị Jizọs anya ..." (Ndị Hibru 12: 1).
Oge ọ bụla m gụrụ akụkọ Pọl, ọ na-atụ m n'anya na ọ ga-achọta ike ọ bụla n'agbanyeghị ike ọgwụgwụ na ọbụnadị ịda mba. Ọ bụrụ na m kpebisiri ike, m nwere ike ịmụta imeri ike ọgwụgwụ ka o mere - gị onwe gị kwa.
Gịnị ka ọ pụtara ịbụ '' ike gwụrụ ma mee nke ọma ''
Okwu ahụ ike gwụrụ, na otu ọ na-adị n'anụ ahụ, bụ ihe anyị maara nke ọma. Akwụkwọ ọkọwa okwu Merriam Webster kọwara ya dị ka "ike gwụrụ n'ike, ntachi obi, ume ma ọ bụ ọhụụ". Mgbe anyị ruru ebe a, mmụọ adịghị mma nwekwara ike ibilite. Olu ahụ gara n'ihu ịsị: "inwe ndidi gwụrụ, ndidi ma ọ bụ obi ụtọ".
Ọ dị mma ịmara na nsụgharị Bible abụọ nke Ndị Galeshia 6: 9 mere ka njikọ a pụta ìhè. The Amplified Bible na-ekwu, "Ka anyị ghara ịda mba ma ka anyị ghara ịda mba…", na The Message Bible na-enye nke a: "Ya mere, ka anyị ghara ikwe ka ike gwụ anyị ịme ihe ọma. N’oge dị mma anyị ga-aghọrọ ezigbo mkpụrụ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mbà ma ọ bụ kwụsị “.
N’ihi ya, ka anyị ‘na-eme ihe ọma’ dị ka Jizọs mere, anyị kwesịrị icheta iji oge anyị niile zie ozi ọma otú anyị chọrọ.
Ihe e kwuru n’amaokwu a
Ndị Galetia isi 6 na-akọwapụta ụzọ ụfọdụ dị mkpa iji gbaa ndị ọzọ kwere ekwe ume ka anyị na-elekwa onwe anyị anya.
- Idozi na weghachi umu nne anyi site na ichebe anyi n’onwa imehie (v 1)
- Na-ebu ibe anyị arọ (v 2)
-Nghara itu onwe ayi elu, site na iji ya tunyere ndi ozo (v 3-5)
- Igosi ndi nile n’enyere anyi aka imuta ma mee ka okwukwe anyi sie ike (v. 6)
- Anwa inye Chineke otuto karia ime onwe ayi otuto site n'ihe ayi neme (v 7-8)
Paul mechiri ngalaba a na amaokwu nke 9-10 na arịrịọ ka anyị gaa n'ihu ịgha mkpụrụ ọma, ọrụ ọma ndị ahụ emere n'aha Jizọs, mgbe ọ bụla anyị nwetara ohere.
Nye bụ onye na-anụ Akwụkwọ Ndị Galeshia, gịnịkwa bụ ihe mmụta ahụ?
Paul ekewet leta emi ọnọ mme ufọkabasi emi enye ọkọtọn̄ọde ke usụk usụk Galatia ke akpa isan̄ isụn̄utom esie, eyedi ke uduak ndisuan enye ke otu mmọ. Otu n’ime isiokwu nke akwụkwọ ozi a bụ nnwere onwe n’ime Kraịst megide ịgbaso iwu ndị Juu. Pọl degaara ndị Juu ahụ akwụkwọ, karịsịa ndị na-emebiga ihe ókè n'ime chọọchị ahụ nke kụziri na mmadụ kwesịrị ido onwe ya n'okpuru iwu na ọdịnala ndị Juu na mgbakwunye na ikwere na Kraịst. Isi okwu ndi ozo di n’akwukwo ahu bu nke azoputara site n’okwukwe nani na oru nke Muo Nso.
Chọọchị ndị natara akwụkwọ ozi a bụ ngwakọta nke ndị Juu na ndị Jentaịl. Paul na-agbali ichikota uzo di iche iche site n’ichetara ha onodu ha na Kraist. Ọ chọrọ ka okwu ya mezie nkuzi ụgha ọbụla enyere ma weghachite ha n’eziokwu nke oziọma. Oru nke Kraist n'obe wetara anyi nnwere onwe, ma dika o dere, “… ejila nnwere onwe gi ime ihe banyere anu aru; kama na-ejere ibe unu ozi, jiri obi umeala n'ịhụnanya. N'ihi na emezuru iwu ahu dum na idebe otu iwu a: 'Hụ onye agbata obi gi n'anya dika onwe gi' ”(Ndi Galetia 5: 13-14).
Ntụziaka Pọl ka dị irè taa dị ka ọ dị mgbe o tinyere ya n'akwụkwọ. Enweghi ụkọ ndị nọ ná mkpa gburugburu anyị ma kwa ụbọchị anyị nwere ohere ịgọzi ha n'aha Jizọs.Ma tupu anyị apụọ, ọ dị mkpa iburu ihe abụọ n'uche: Ebumnobi anyị bụ igosipụta ịhụnanya Chukwu ka nata otuto, ma ike anyị sitere na Chukwu, ọ bụghị ebe nchekwa anyị.
Ihe anyị 'ga-aghọrọ' ma ọ bụrụ na anyị atachie obi
Owuwe ihe ubi ahụ Pọl kwuru okwu ya n’amaokwu nke 9 bụ ihe dị mma sitere n’omume ọma ọ bụla anyị na-eme. Jisos n’onwe ya kwukwara uche puru iche na owuwe ihe ubi a n’eme ndi ozo n’ime ayi n’otu oge.
Ọrụ anyị nwere ike inye aka weta owuwe ihe ubi nke ndị na-efe ofufe n'ụwa.
“N'otu aka ahụ, ka e mee ka ìhè unu nwupụta n othersihu ndị ọzọ, ka ha wee hụ ọrụ ọma unu wee too Nna unu nọ n'eluigwe” (Matiu 5:16).
Otu ọrụ ndị ahụ n'onwe ha nwere ike iwetara anyị owuwe ihe ubi nke akụnụba ebighi ebi.
Re ihe gi, nye ya ndi ogbenye. Nye onwe-gi akpa nke nādighi-agwu agwu, àkù di n’elu-igwe nke agaghi-agwu agwu, ebe onye-ori nādighi-abiaru nso, ebe nla nādighi-ebibi ihe. N’ihi na ebe akụ gị dị, n’ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa ”(Luk 12: 33-34).
Kedu ka amaokwu a si pụta anyị taa?
Imirikiti ụka dị iche iche na-arụsi ọrụ ike na usoro nke ozi ma na-enye ohere ndị magburu onwe ha ịrụ ọrụ ọma ma n'ime ma gafee mgbidi ụlọ ahụ. Ihe ịma aka nke gburugburu ebe obibi na-enye obi ụtọ bụ itinye aka na-enweghị oke.
Enweela m ahụmịhe nke ịgafe ụlọ ụka "ngosi ọrụ" na ịchọta onwe m na-achọ isonyere ọtụtụ otu dị iche iche. Ma nke ahụ anaghị agụnye ezi ọrụ na-enweghị isi m nwere ike ịnweta oge izu m.
Amaokwu a nwere ike hụrụ dị ka ihe ngọpụ na-inupụ onwe anyị n'ihu ọbụna mgbe anyị na-ama na overdrive. Ma okwu Pọl nwekwara ike ịbụ ịdọ aka ná ntị, na-eduga anyị ịjụ "Olee otú m ga-esi ghara ịda mbà?" Ajụjụ a pụrụ inyere anyị aka isetịpụrụ onwe anyị oke ala, na-eme ka ume na oge anyị ga-eji nwee ọ effectiveụ na ọ joyụ.
Amaokwu ndị ọzọ n’akwụkwọ ozi Pọl na-enye anyị ụkpụrụ nduzi ụfọdụ anyị ga-atụle:
- Cheta na anyi kwesiri ije ozi n'ike nke Chineke.
“Enwere m ike ime ihe a niile site na onye na-ewusi m ike” (Fil. 4:13).
- Cheta na anyị agabigaghị ihe Chineke kpọrọ anyị ka anyị mee.
“… Onyenwe anyị ekenyela onye ọ bụla ọrụ ya. A kụrụ m mkpụrụ ahụ, Apọlọs kwọsara ya mmiri, ma ọ bụ Chineke mere ka o too. Ya mere, ma onye na-akụ ma onye na-agba mmiri abụghị ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị Chineke, Onye na-eme ka ihe too ”(1 Kọr. 3: 6-7).
- Cheta na ebumnobi anyị maka ịrụ ezi ọrụ aghaghi ịdabere na Chineke: igosipụta ịhụnanya ya na ijere ya ozi.
“Na-ahụnụ ibe unu n'anya n'ịhụnanya. Sọpụrụnụ ibe unu n’elu onwe unu. Ya adịla mgbe ị ga-akọ ịnụ ọkụ n'obi, kama jigide ịnụ ọkụ n'obi ime mmụọ gị n'ijere Onyenwe anyị ozi "(Ndị Rom 12: 10-11).
Gịnị ka anyị kwesịrị ime ma ike gwụ anyị?
Ka anyị na-amalite inwe nkụda mmụọ na nkụda mmụọ, ịchọta ihe kpatara ga-enyere anyị aka iwere usoro doro anya iji nyere onwe anyị aka. Ọmụmaatụ:
Ndi mmesikpa mba ke n̄kan̄ eke spirit? Ọ bụrụ otu a, ọ bụ oge iji "jupụta tank ahụ". Kedu? Jizọs hapụrụ ịnọ naanị ya na Nna Ya, anyị nwekwara ike ime otu ihe ahụ. Oge dị jụụ n'okwu ya na ekpere bụ naanị ụzọ abụọ iji nweta nkwanye mmụọ.
O n’ahu m choro ezumike? N’ikpeazụ mmadụ niile gwụchara ike. Kedu ihe ịrịba ama nke ahụ gị na-enye gị na ọ chọrọ nlebara anya? Ọ bụrụ na anyị dị njikere ịkwụsị ya na ịmụtu iwe ruo oge ụfọdụ, ọ ga-enyere anyị ezigbo aka.
Ọrụ a ọ̀ na-agwụ m ike? Emere anyị maka mmekọrịta yana nke a bụkwa eziokwu maka ọrụ ije ozi. Kekọrịta ọrụ anyị na ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị na-eweta ezigbo ọbụbụenyi na mmetụta dị ukwuu na ezinụlọ ụka anyị na ụwa gbara anyị gburugburu.
Onye-nwe-ayi na-akpọ anyị ndụ na-enye obi ụtọ nke ije ozi na enweghị ụkọ mkpa a ga-egbo. Na Ndị Galetia 6: 9, Pọl onyeozi na-agba anyị ume ịnọgide n’ozi anyị ma na-enye anyị nkwa nke ngọzi dị ka anyị na-eme. Ọ bụrụ na anyị arịọ, Chineke ga-egosi anyị otu anyị ga-esi gbasie mbọ ike n’ozi ahụ na otu anyị ga-esi nwee ahụ ike ogologo oge.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis chọrọ ka ndị bishọp nwee ikikere Vatican maka ụlọ akwụkwọ okpukpe ọhụrụ
Next Post → Post ozo:Ragusa: amuru ohuru na ahihia ahihia